Ejipta: Literatiora “Kleenex” ao amin’ny foaran’ny boky iraisampirenena ao Kairo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2018 5:26 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, srpski, বাংলা, English
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny janoary 2009)
Nataon'ny bilaogera ejipsiana nihotakotaka ny Foaran'ny boky iraisampirenena 2009 tao Kairo tamin'ny famoahan-dry zareo lohatenim-boky vaovao miisa 15. Ny dinan'ny mpanoratra no mametraka ny literatioran'ny bilaogera ho literatiora “Kleenex”. Nanandra-peo hisolo tena ny bilaogera i Ghada Abdel Aal.
Nanoratra i Ahmed Al Sabbagh:
Seminera mitondra ny lohateny hoe “literatioran'ny bilaogera … hiakiaky ny tanora sa Kleenex?” notontosaina tamin'ny alakamisy 22 janoary 2009 tao amin'ny foaran'ny boky iraisampirenena ao Kairo fanao isa-taona. Ny seminera dia nomanin'ny mpanoratra fanta-daza Youssef Al Ka'eed sy ireo bilaogera Ghada Abdel Aal, Shady Aslan, ary Mayada Medhat miresaka momba ny famahanam-bilaogy.
Ahmed Al Sabbagh nandrohy ihany koa tamin'ny lahatsarin'i Ghada izay nanombohany namaritra ny literatioran'ny bilaogera ho toy izao manaraka izao:
Tahaka ny endrika literatiora hafa, maneho ny eritreritra, fahatsapana ary izay mivoaka amin'ny zanak'olombelona ny famahanam-bilaogy.
Notsongainy ihany koa ny nosoratan'i Tawfiq El-Hakim namariparitra ny votoatin'ny tena literatiora tamin'ny filazana hoe
Io no literatiora ankalamanjana, fanehoan-kevitra literera maneho ny fahafahana sy ny fankamamiana; voambolana izay mivoaka avy amin'ny fo iray mankany amin'ny hafa maneho ny halalin'ny tara-pisainan'olombelona mankany amin'ny fahafahana, fitandroan-drariny ary ny fahadiovam-po. Nilaza ihany koa i Tawfiq El-Hakim fa izay nozaraintsika amin'io karazan-diteratiora io dia kely indrindra tahaka ny izaràntsika ny fitandroan-drariny sy ny fisokafana – izay indrindra no ataonay amin'ny maha-bilaogera anay.
Avy eo izy nifindra nankany amin'ny fiarovana ny fahatsoran'ny famahanam-bilaogy:
Tao amin'ny antsafa iray Atoa Youssef Al Ka'eed nilaza hoe raha mila voambolana folo ianao hanehoana eritreritra iray dia ireo voambolana folo ireo ihany ampiasaina hanehoana izay eritreritra izany. Tsy ilaina ny mampidera fahaizana voambolana, rehefa ny hamoaka hafatra araka izay endrika mora takarina indrindra no tanjontsika. Amin'izay isika tsy mpanao hevi-dravina … Tsotra dia tsotra izahay ary tsy heloka ny manoratra boky somary manala hamohamo kely.